Shina nampangina ny orinasa mpamokatra Hydraulika LBS100 sy mpanamboatra | Shengda
Mpanitsakitsaka hidy hidy (karazana boaty)
• Teknolojia ambany feo
• Volavola farany, fanoherana ny hovitrovitra amin'ny takelaka
• Rafitra mihidy, fiarovana tsara ho an'ny vatana lehibe
Ny mpanafika karazana LBS nampanginina dia mampiasa rafi-pitantanana solika mandroso, tsy dia misy fanjifana solika, fanitsiana mety ary fahombiazan'ny asa be. Ny fitaovana iray manontolo dia misy ihany koa ny famolavolana mandroso, ny firafitra tsotra, ny singa kely kokoa, ny tahan'ny olana ambany ary ny fikojakojana mora.
Tombony ho an'ny mpanamboatra:
1. Fikarohana manokana ho an'ny ankamaroan'ny kojakoja fitadiavana.
2.Manana ny fitaovana famokarana sy fanaraha-maso mandroso indrindra, fotoana fandefasana fohy
3.Fomba fanaraha-maso kalitao henjana, andramo ny vokatra tsirairay alohan'ny fandefasana
4. Rafitra fanaraha-maso kalitao feno, ISO9001: 2015
5.Product mifanaraka amin'ny fenitra Eoropeana, miaraka amin'ny mari-pahaizana CE.
6.Ny vanim-potoana Warranty dia herintaona. Mampanantena izahay fa hamaly ora sy efatra amby roapolo ora hamaha. Raha ilaina dia mandefa mpiasa teknika izahay hamaha ny olana.
Misafidy ireo fitaovana tsara indrindra izahay: 40CrNiMo, 20CrMo, 42CrMo
Teknolojia fitsaboana hafanana lehibe. Manana atrikasa fitsaboana hafanana manokana sy fitsaboana hafanana 10 taona izahay
Manana ny injeniera voalohany izahay, ary ny ankamaroan'ny mpiasanay dia manana traikefa mihoatra ny 5 taona
Niorina tamin'ny taona 2009 ny milina Huaian Shengda, ny orinasa dia manarona faritra 30000. Miorina amin'ny R&D, famokarana ary fivarotana mpamaky hydraulic isika. Miaraka amin'ny traikefantsika be dia be sy ireo mpiasa mazoto sy miasa mavitrika dia afaka mahafeno fepetra takiana isan-karazany amin'ny karazana mpanjifa izahay. Nosoratanay ny marika "LBS" anay manokana. Ny vokatra LBS Brand dia manana tombony amin'ny fikojakojana ambany, ny fiainana maharitra, ary ny fiasa vaovao. Tao anatin'izay taona maro lasa izay, ny orinasanay dia manohy manome naoty ny mpamatsy azo itokisana kalitao avo lenta avy amin'i SANY, XCMG ary orinasa maro mpanafika malaza.
Toerana niandohana Jiangsu, Sina (Tanibe)
Anaran'ny marika LBS
Laharana maodely LBS100
Type Breakers Hydraulika Type Box
Color Mangataka mavo na mpanjifa
Application Fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary fananganana
Savaivony fitaovana 100 mm
Piston vy mifangaro kalitao avo lenta
Fanerena menaka miasa
Fikorianan'ny solika ilaina
Ny fahita matetika
~ 450 780
Ny lanjan'ny mpitatitra
9.0 ~ 17,0
fonosana:Fonosana fanondranana mahazatra: singa iray ao anaty kitapo fitahirizana banga, avy eo ao anaty boaty hazo poly. Ny fonosana tsirairay dia misy kojakoja manaraka: paingotra roa, fantsona roa, iray tavoahangy N2 sy fatra faneriterena, kitapo tombo-kase iray hafa, boaty fitaovana iray misy fitaovana fikojakojana ilaina ary boky fampianarana ihany koa.
A: Eny, ny orinasanay dia niorina tamin'ny 2009.
F: Azonao antoka ve fa mifanaraka amin'ny excavator ahy ny vokatrao?
A: Ny fitaovantsika dia mety amin'ny ankamaroan'ny mpitrandraka. Asehoy anay ny maodelin'ny excavator anay, hamafisinay ny vahaolana.
F: Afaka mamokatra mifanaraka amin'ny volavolan'ny mpanjifa ve ianao?
A: Azo antoka, serivisy OEM / ODM misy. Mpanamboatra matihanina izahay.
F: Ahoana ny amin'ny fotoana fandefasana?
A: 5-25 andro fiasana aorian'ny fandoavana.
F: Ahoana ny fonosana?
A: Ny fitaovanay nofonosina sarimihetsika mihinjitra, nofonosina valizy pallet na polywood; na araka ny fangatahana.
Manaraka: Fampijanonana karazana Hydraulika tsy mitongilana LBS140
Breaker Rock Hydraulika tsara
Mpanamboatra mpamaky vatolampy Hydraulika
Fizarana fanapahana vato Hydraulika
Vidin'ny mpandika vato Hydraulika
Fiatoana famonoana vato mahery vaika